I-PMP eqinisekisiweyo yeeNgxoxo zoLononongo lwaBathengi-ITS Tech School
Udliwano-ndlebe olunikezwa ngesiqinisekiso kunye nokuqinisekiswa konke kulungile kwigolide. Kungakhathaliseki ukuba uyimpawu okanye ufuna ukuba uyenze ukuphumelela ekunqobeni umsebenzi wakho wefantasy. Nayi i-14 Iingxoxo zeeNtetho kunye neempendulo ze-PMP eziqinisekisiweyo zoBugcisa ukuphumeza uvavanyo lovavanyo lwangaphakathi.
UkuPhathwa kweProjekthi Iingxoxo zeeNtetho neePendulo
I-PMP Imibuzo yoNxibelelwano kunye neempendulo zabo ezilungileyo:
1. Ndixelel ngesiqu sakho.
Qala kwaye uqede ngokulungiswa kobugcisa ngaphambili kweengcamango zakho. Ngelo xesha xa udliwano-ndlebe ebuza lo mbuzo abafuna ukuyiqonda into eyenza ucinge ukuba uyona nto ingcono kakhulu kule ndawo, ngoko ke unike impendulo efanele. Zama ukungabandakanyi ubomi bakho kule mpendulo, gcina unamathela kwizakhono.
2. Usebenze phi ixesha kutshanje?
Imbali yakho yexesha elidlulileyo yokusebenza malunga nokuqinisekiswa kwe-PMP ukulungiselela. Yenza impumelelo yakho yangempela kunye naluphi na ama-accolades. Ngokufanayo uthetha ngawaphi uhlobo oluya kuhlawulela esi sikhundla ukuba sikwazi ukuqhubela phambili kwiminqweno yakho.
3. Ngaba unxaxheba kulo msebenzi?
Jongane nale mpendulo. Imibuzo yokulandelelana ingaba malunga nemimandla yomsebenzi oye wabambisana nawo kunye naziphi na iziganeko ezibonakalisa eziphambili.
4. Ziziphi iingxaki onokuzithemba ukuzenza kulo msebenzi?
Ngenxa yeziganeko zakho zangaphambili, impendulo yakho kufuneka ifake idibanti yezifundo eziphunyeziweyo kunye nento enokufuna ukuyifaka kwi-firm firm.
5. Uzibona phi kwixesha le-5 iminyaka?
Ngokubhekiselele ekuqinisekiseni ulawulo lwenkqubo yakho, kuya kufuneka ukuba usebenze kwintlangano kwaye uvumeleke ukufezekisa enye intsebenzo.
6. Kutheni ushiye umsebenzi wakho wokugqibela?
Ukukhangela iingcango ezivulekileyo okanye ithuba lokusebenza kwenye indawo. Xoxa ngendlela ukulungiselela ukulungiselela iPPP kuye kwenza ukuba usebenze kule nhlangano kangcono.
7. Yiyiphi impumelelo yakho ephawulekayo?
Thetha malunga nokufezekisa kwakho, izibophelelo kunye nenkcubeko yeenkcubeko ngokubanzi, kunye nendlela ezuze ngayo inxaxheba kunye nentlangano yonke.
8. Yintoni esiya kuba nako ukukulindela kuwe kwiintsuku zokuqala ze-90?
Misela impendulo ephawulekayo apho unokubeka khona iPPP yakho ilungiselele ukusebenzisa ukuzisa iziphumo ezilungileyo.
9. Ziziphi iimfuno zakho zomvuzo?
Yilungiselele kwangaphambili kwaye ubanike ukuba bacinge ukuba uyakwazi ukucinga, ngokukodwa ucinge ngokuqinisekiswa kolawulo lokuthengisa.
10. Ngaba yinyani ukuba ungumntu onobambiswano?
Abadliwano-ndlebe bakho kufuneka bazi ukuba unokusebenza kunye neqela labo elifanelekileyo kwaye ukuba luyimfuneko, lungiselela abanye.
11. Ngaba wenze nayiphi na iimbopheleleko kwintsimi yokulawulwa kwemisebenzi?
Kwimeko apho ukhusele khona ityala eliye lacinga kwakhona ukulawulwa kwamanzi kwishishini, fundisa ukukhangela ngalo kwaye uvumele iimbuzo zokuphendula.
12. Kutheni sifuna?
Xoxa ngezinto ezithinta kuwe kule ntlangano kunye nento ozisa kuyo itafile.
13. Unokubetha njani izithintelo zobugcisa ngaphambili?
Hlola nayiphi na imithintelo emsebenzini oye wabhekana nayo malunga nomthengi okanye indlela ojongene ngayo nesimo esixhatshazayo.
14. Ngaba uya kusebenza phantsi kwesisindo?
Ngethuba elifanelekileyo lokuba ulawulo lwexhala luyinto yakho, ngelo xesha uchaze kubo ukuba unobumbo obukhulu kangakanani phantsi kweemeko ezinyanzelekileyo.
Bona kwakho:I-PMP yeSatifikethi seMisebenzi yeMisebenzi